Ogaden News Agency (ONA) – Shir ay Xilka Kula Kala Wareegayeen Hogaanada HAAJ, HWF iyo HAU oo Gudoomiyaha Lagusoo Dhaweeyey
Shir ay Xilka Kula Kala Wareegayeen Hogaanada HAAJ, HWF iyo HAU oo Gudoomiyaha Lagusoo Dhaweeyey
Posted by ONA Admin	/ June 1, 2015
Waxaa xalay shir is-gaadhsiinta ah isugu yimid hawlwadeenka Hogaankii HAAJ iyo mudanayaasha loo magacaabay Hogaanada Arimaha Abaabulka iyo Jaaliyadaha, Warfaafinta iyo Arimaha Ururka. Waxaa shirkaa kala soo qaybglay hawl-wadeenada Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan oo mudanayaasha u jeediyay khudbad dhaxalgal ah.
Ugu horreyna waxaa lagu furay shirka wacdi diini ah oo uusoo jeediyay mudane Maxamad Rashiid oo macneeyay aayadaha uu Ilaahay ugu sheegay muslimiinta shuruudaha guusha. Wuxuu mudane M. rashiid kula dardaarmay dhamaan xubnaha ururka in lala yimaado tilmaamahaa loona dulqaato dhibaatada halganka. Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha JWXO oo soo dhaweeyay xubnaha shirka kasoo qaybgalay.
Gudoomiyaha wuxuu aad ugu dheeraaday xaaladaha kasoo cusboonaaday aagga Shilaabo oo maxaysatada Hawaarinta ay dadka shacabka ah ku xasuuqeen. Wuxuu sheegay Adm. Maxamad Cumar in maxaysatada ay horey u gaadhsiiyeen dadka shacabka ee dagan gudaha Ogadenya dhibaata ka badan midda hadda soo gaadhay dadka dagan xadka u dhexeeya Somaliya iyo Itobiya. Wuxuu Gudoomiyaha ku amaanay dadka shacabka ah ee ka dhiidhiyay inay bixiyaan lacagta baada ah ee Gibirka lagu tilmaamo ee hubka u qaatay inay iskaga difaacaan maxaysatada uu gumaysiga Itobiya u hubeeyo laynta dadweynaha Somaliyeed meel ay joogaanba. Wuxuu Gudoomiyaha JWXO ku tilmaamay wax aad looga xumaado in iyadoo shacabka Somaliyeed sidaa ay Itobiya u gumaadayso in safaaradda Itobiya ee Muqdisho shir ay ku qabato ayna kasoo qaybgalaan dhamaan madaxda Somaliyeed.
“Waxaan ka xumahay hadalada ay halkaa ka jeediyeen madaxda ugu sareysa Somaliya, iyagoo amaanay Itobiya kuna tilmaamay wax aanay waligeed ahayn oo ah saxiibka Somaliyeed. Waa nasiibdarro ay taariikhda xusi doonto” ayuu yidhi Gudoomiyaha JWXO. Wuxuu Gudoomiyaha ku dheeraaday dardaaranka uu siinayay maamulada cusub iyo habkay hawsha ku wadi lahaayeen iyagoo kaashanaya xubnaha iyo hawl-wadeenka aqoonta leh.
Waxaa sagootintii gudoomiyaha ka dib, hadalka qaatay Gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay Warfaafinta mudane Xassan Macallin oo xilwareejin sameeyay iyo inuu halkaa uga mahadnaqo xubnihii hawsha la waday intuu ahaa Gud. ku-xigeenka HAAU.
Warbixinta HWF ka dib, waxaa lagu soo dhaweeyay Gud. HAU mudane Xuseen Noor oo u mahadnaqay madaxda shirka kasoo qaybgashay, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu hawl-wadeenka jaaliyadaha kala qaybgalo shir noocanoo kale ah iyo is-barashada madaxda qaarkood oo aanay horey kulan wada-shaqayn ah isgu imanin. Wuxuu Gudoomiyaha cusub ee Hogaanka Arimaha Ururka (HAU) ka codsaday madaxda shirka kasoo qaybgalay inay ku taageeraan dhismaha hogaanka iyo taabagalinta barnaamijyada ladoonayo inuu hirgaliyo hogaanka HAU marka ladhamaystiro dhismaha hogaanka.
Waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyadaha (HAAJ) mudane C/qaadir Hirmooge oo u mahnaqay gudoonkii hore ee HAAB, isagoo ku tilmaamay inay shaqa loo aayo kasoo qabteen hogaanka una dhiseen qaab maamul oo taabagal ah. Wuxuuna ballan qaaday inuu hawsha halkeedii kasii wadi doono, shirar dambena ay wada qaadan doonaan.
Intaa ka dib, ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay xubnihii qaaradaha ee kasoo qaybgalay shirka oo dardaaran iyo guubaabo usoo jeediyay hogaanada cusub. Waxaa ka mid ahaa hadalada ay madaxda u jeediyeen hogaanada inay ku talagalaan in lala xisaabtamayo oo aanay xilka loo magacaabay la seexanin. Waxay dhamaantood balan qaadeen inay wada-shaqaynta sii xoojin doonaan, diyaarna u yihiin inay halganka umadda Somaliyeed ee Ogadenya looga xoreynayo gumaysiga Itobiya.
Waxaa lagu soo gunaanaday mudane Xaaji Ciraaqi oo dardaaran, xogwaran iyo duco kusoo gabagabeeyay shirka.